Evad0rs को अनुसार Evasi7n3को बारेमा सत्य आईफोन समाचार
केहि घण्टा पहिले समाचार भयो: अपेक्षित IOS7भागनेवाला यो अन्तत: सबैका लागि उपलब्ध थियो, र नि: शुल्क। विश्वभरिका सबै ब्लगहरू समाचार र ईवासी ० एनका साथ हाम्रा उपकरणहरू कसरी जेलब्रेक गर्ने भन्ने बारे ट्यूटोरियल प्रकाशित गर्न हतार गरिरहेका थिए। तर तिनीहरू आइपुग्ने बित्तिकै उनीहरू आए। नयाँ समाचारले जेलब्रेकले प्रदान गर्ने स्वतन्त्रताको आनन्द लिने हामी सबैमा श doubts्का उब्जायो। र यस्तो देखिन्थ्यो कि जेलब्रेकको अचानक सुरूवातले केही लुकाएको थियो: यसका विकासकर्ताहरूको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण आर्थिक चासो। तर यो पनि हो कि ह्याकि ofको छाया पनि Evad3rs मा देखा पर्‍यो किनभने चीनमा साइडियाको सट्टामा टाईग भन्ने वैकल्पिक स्टोर स्थापना गरिएको थियो, जसमा पाइरेटेड अनुप्रयोगहरू समावेश छन्।
अर्को केहि घण्टा ट्विटर आगोमा छ। सौरिक, पोड २g र जेलब्रेकको संसारका अन्य प्रख्यात विकासकर्ताहरू बीच क्रस आरोपहरूले वातावरण सिर्जना गरे जुन जेलभ्रेकको प्रक्षेपणमा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन। सौरिकले दावी गरे कि उनले नयाँ इवासी ० to मा सम्बन्धित कुनै पनि कुराको पहुँच पाएनन्, र यसको बारेमा केहि पनि थाहा नपाओस्, केहि उत्सुक कुरा, जुन कि उहाँ सिर्जनाकर्ता हुनुहुन्छ र सिडिया चलाउनुहुन्छ। उनले ट्विटरमा आश्वासन पनि दिएका थिए कि उनले आवेदनको ह्याकि withको साथ टाईगको सम्बन्धको बारेमा इभ्याड rs लाई पहिले नै अनुमोदन गरिसकेका छन। Evad3rs सँग सार्वजनिक नोट लेख्नु बाहेक अरु विकल्प छैन जसमा उसले भन्छ कि के भयो को बारे मा सम्पूर्ण सत्य बताउन। सबै विवरणहरू, तल।
अधिकांश समस्याहरू चिनियाँ अनुप्रयोग स्टोर टाईगको समावेशको कारण हुन्छ। आईओएस Jail जेलब्रेकको विकासको क्रममा कम्पनीले हामीलाई एक सहयोग प्रस्ताव गरे जुन हामीलाई चीनको जेलब्रेकमा समावेश गर्नका लागि यसको स्टोर प्रस्ताव गरीरहेको छ। टाइग चिनियाँ भाषामा लेखिएको एप स्टोर हो, डिजाइनका लागि र डिजाइन गरिएको छ चिनियाँ बजार। त्यो देश। प्रयोगकर्ताहरूले टाईग प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। साइडिया पनि स्थापना गर्न सकिन्छ र टाईगलाई पछि हटाउन सकिन्छ।
टाईगले हामीलाई कहिले पनि उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा बेच्नको लागि हाम्रो शोषण प्रकट गर्न भन्दैन। हामीलाई केवल उनीहरूको अनुप्रयोग स्टोरलाई हाम्रो जेलब्रेकमा समावेश गर्नका लागि सोधेको थियो जसरी साइडियालाई विश्वव्यापी रूपमा समावेश गरिएको छ, र त्यस्तै गरी ब्ल्याक्रा १ जस्ता अन्य जेलब्रेकहरूले सिडियाबाहेक अन्य स्टोरहरू पनि समावेश गर्दछन्।
सुरक्षा हाम्रो ध्यानको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो, र विश्वव्यापी पेशेवरहरू द्वारा गरिएको सुरक्षा विश्लेषणलाई धन्यवाद, हामी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्नका लागि उपलब्ध सबैभन्दा कम जोखिम अनुप्रयोगहरूको प्रस्ताव गर्दछौं। हामीलाई हाम्रो दोषारोपणले धेरै दुःखी तुल्यायो जुन हाम्रो जेल भंगमा कुनै प्रकारको लुकेको "हतियार" समावेश छ कि छैन भन्ने बारे हामीलाई लगाइएको छ।
ह्याकि Avo नगर्नु हाम्रो लागि पनि आवश्यक छ। हामी धेरै माफी चाहन्छौं र आज के भएकोमा लज्जित छ। हामी सबैले विगतमा ह्याकि againstको बिरूद्ध बोलेका छौं। हामी सोच्दैनौं कि विकासकर्ताहरूले उनीहरूको कामको लागि शुल्क नलगाए। टाईगसँगको हाम्रो सम्झौतामा हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यौं कि उनीहरूसँग स्टोरमा पाइरेटेड अनुप्रयोगहरू हुन सक्दैनन्। तिनीहरूसँग काम गर्न यो आधारभूत अवस्था थियो।
हाम्रो सम्झौताको बावजुद पाइरेटेड अनुप्रयोगहरू तपाईंको स्टोरमा फेला पारिएका छन्। यो अस्वीकार्य हो, र उनीहरूले राम्रो विश्वासका साथ यस समस्यालाई सुल्झाउन कडा परिश्रम गरिरहेका छन्, र हामीले उनीहरूलाई सूचित गरेका सबै थोकहरू हटाइदिएका छन। हामी जेल ब्रेकको विकासमा यति कडा परिश्रम गरिरहेका थियौं कि बाँकीलाई हामीले त्यति ध्यान दिएनौं। हामीलाई माफ गर। हामी यस मुद्दालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न अनुगमन गर्न जारी राख्नेछौं। टग जेलब्रेकबाट हटाइनेछ यदि यो समाधान गरिएको छैन।
तपाईं मध्ये धेरैले सोच्न सक्नुहुन्छ कि किन यो जेलब्रेक साइडिया वा मोबाइलसब्स्ट्रेट बिना आईओएस updated मा अपडेट गरिएको थियो। we हामीले ताईगको प्रस्ताव प्राप्त गरिसकेपछि, हामीले हाम्रो मित्र सौरिकलाई यो स्वीकार गर्ने निर्णयको बारेमा सूचित गर्यौं। सौरिकिटले चिनियाँ कम्पनीहरूसँग वार्ता गरेका थिए र उनीहरूले हामीलाई काउन्टर प्रस्ताव गरे तर दुर्भाग्यवस वार्ता असफल भयो। केहि दिन पछि खबर आयो कि सौरिक अर्को समूहको साथ काम गरिरहेको थियो जो हाम्रो अघि जेलभरो शुरू गर्‍यो। यसैले हामीले यसलाई सुरू गर्ने निर्णय गर्‍यौं जुन थाहा पाए कि Cydia, MobileSubstrate, र अन्य अनुप्रयोगहरू केहि दिनमा अपडेट हुनेछ, जस्तो कि सदैव रहेको छ।
हो, हामीले हाम्रो कामबाट आर्थिक रूपमा फाइदा उठायौं, जस्तै जेलब्रेक समुदायमा अन्यले विकासकर्ताहरू, भण्डार मालिकहरू, इत्यादि सहित। हामीद्वारा विकसित कुनै पनि जेलब्रेक प्रयोगकर्ताहरूको लागि सँधै निःशुल्क रहनेछ, तर हामी विश्वास गर्छौं कि हामीसँग अन्य विकासकर्ताले जस्तै क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार छ। हाम्रो सबै अनुदानहरू समुदायको हितमा काम गर्ने जगमा जान्छन्।
हामीले यहाँ संक्षिप्त गरेको एक लामो चिठी, र जुन सबैले आफ्नो निष्कर्ष कोर्न को लागी गर्न सक्छन्। म कोभित्र पस्ने छैन म को सही र को गलत, किनकि न त १००% नै सही हुन सक्छ, तर के कुरा स्पष्ट छ जुन साइडियाले (यसको निर्माता सौरिक) देखेको छ चीनियाँ जस्तो ठूलो बजार गुमाएर उनीहरूको "एकाधिकार" जोखिममा पार्नुहोस्, उसले यसबाट बच्नको लागि आफ्ना सबै हतियारहरू तान्दछ। बाँकी केवल बहाना र अनुमानहरू छन्।
मलाई यो कुराको लागि चासो लाग्ने केवल कुरा हो अनुप्रयोगहरू अद्यावधिक छन् र म मेरो आईफोन leave लाई आईओएस .5.०..7.0.4 को साथ छोड्न सक्छु। तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » Evad0rs को अनुसार Evasi7n3को बारे मा सत्य
जेभियर मार्टिन भन्यो
मलाई लाग्छ कि यी समस्याहरू सबैका लागि झन् खराब छ, आईओएस .7.1.१ को प्रतिक्षा गर्नुको सट्टा एक महिनामा बाहिर आउन र यसलाई सुरूवात गर्न, उनीहरूले एप्पललाई xploit दिने निर्णय गरे, अर्को धेरै पाउनको लागि धेरै कामको आवश्यक छ।
आईओएस .7.0.०.x मा अझै बगहरू र पोलिश गर्न चीजहरू छन्, साथै आईओएस .7.1.१ मा हासिल भइरहेका सुधारहरू ... तर दुबै पक्षहरूको चाहनाले यसको कारण भएको छ। अब म आईओएस .7.0.4.०..7 मा फर्किरहेको छैन किनकि आईओएस मा उल्लेखनीय सुधार र सुधारहरू छन् ... तर म जेलब्रेक बिना अर्को stay महिना बस्न चाहन्न, जब मलाई जनवरीमा मेरो ट्वीकहरू गर्ने विचार थियो।
यो यस बीटा २ मा स्थापना गर्न सकिन्छ, तर यसको म्याद सकिने मिति छ र त्यो क्षणदेखि एप्पलले मलाई अपडेट गर्न बाध्य पार्छ, र यदि मैले पहिले नै जेलब्रेकको लागि प्रयोग गरिसकें भने, यसले मलाई फेरि बानीबाट बाहिर जान यसको लागि खर्च गर्नेछ। मलाई आईफोन jump एसमा आईफोन jump एसमा आईफोन। एसमा भयो
Javier Martín लाई जवाफ दिनुहोस्
म यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दछु (एप्पलले रोक्दैन), तर मलाई सुधारहरू मनपर्दछ र ती आवश्यक देखिन्छन्। यसैले म जेलको प्रतीक्षा नगरेको बुझ्दिन।
तिनीहरू सधैं संस्करण X.1 को लागि यस कारणका लागि प्रतीक्षा गर्छन्।
लिबर्टी कार्लिटो भन्यो
निकै रोमान्चक! यो मलाई विकासकर्ताहरूबाट गलत जस्तो देखिन्छ, तिनीहरूले समस्याको साथ एक जेलब्रेक रिलिज गरेका छन्, चाँडै र पैसा कमाउन अपडेट नगरीकन, यस पटक उनीहरूले अत्यन्त नराम्रो गर्यो। जे भए पनि, म आशा गर्दछु कि यो छिट्टै नै हल हुनेछ, तर म महसुस गर्दै छु कि उनीहरूले यो पैसाको लागि गर्न थालेका होन किनकि उनीहरू वास्तवमै विकास गर्न चाहन्छन्।
Libertycarlitos लाई जवाफ दिनुहोस्
के तपाईं कम्प्युटरको अगाडि काम गर्दै हप्ताहरू खर्च गर्नुहुन्छ, परीक्षण गर्नुहुन्छ र समस्याहरूको समाधान गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ अन्य मानिसहरूलाई खुशी पार्न मात्र बदलामा केहि प्राप्त नगरी?
Tooty लाई जवाफ दिनुहोस्
इडियट, उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि तिनीहरू अनगिन्ती घण्टा हुन्छन् जुन उनीहरूले पीसीको अगाडि खर्च गरे कि हामी जेलरोड पाउन सकौं र जसलाई हामी मध्ये कसैले पनि एक डलर तिर्दैनौं, धन्यवाद यस जेललाई सम्भव बनाउने ह्याकर्सलाई। त्यसैले साथीहरू ...
जो कोहीले पनि विकासकर्ताहरूको समूहको आलोचना गर्दछ, जसले केही सफ्टवेयर बनाउन शुरू गर्दछ, र देख्दछ कि यदि उसले एक छवि सार्नको लागि काम गर्छ भने उसले भुक्तानी गर्न चाहन्छ, जुन मैले देखेको छु कि सौरिकले आफ्नो एकाधिकार पाएको चाहन्छ र उनी रिसाए किनभने उनले के तिनीहरूले एक मात्र हुन दिएन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र के उनीहरूले महसुस गर्दैनन् भन्ने हो कि तिनीहरू फेरि त्यसो गर्छन्, म जेलमा छु र मैले मेरो कथनहरू तिर्दछु, तर म सबै कुरा मोड्न सक्दछु।
Julaosoft लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले अर्को सूचना नभएसम्म अघिल्लो प्रतिलिपिको साथ मेरो आईफोन ss पुनर्स्थापित गरें र हेर्नुहोस् यो सबै कसरी हुन्छ।
म IHsn0w र Winocm को लागी प्रतीक्षा गरें IOS को लागि JB सिर्जना गर्न 6.1.3+
यो रेपोमा आईओएस with को साथ उपयुक्त ट्वीकहरू छन्
ब्रायन ब्ल्याज्क्ज भन्यो
के तपाईंसँग खेलहरू जस्तै निःशुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न एक छ?
Bryan Blazquez लाई जवाफ दिनुहोस्
आईओएस for का लागि अपसिन्क पहिले आवश्यक छ र अहिले सम्म समर्थित छैन।
र म कसरी थाहा पाउने छु जब त्यो उपयुक्त छ?
निस्सन्देह वास्तविकताफोनका माध्यमबाट तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ जब यो आईओएस with को साथ उपयुक्त हुन्छ
आह ठीक छ धेरै धेरै धन्यवाद 🙂
येशू अमाडो मार्टिन भन्यो
हामी भाग्यशाली छौं कि छैनौं हेर्नुहोस् र तपाईंको फोन बिच्छेद भयो
येशू Amado मार्टिन जवाफ दिनुहोस्
तपाईंसँग एक छ अनुप्रयोग ओसीए खेलहरू डाउनलोड गर्न को लागी स्थापनाको लागि प्रतिस्थापनको रूपमा तर आईओएस for को लागि
पैसाले सबै कुरा र सबैलाई भ्रष्ट गर्दछ। सबै जना पैसा खोज्दैछन् र सबैभन्दा पहिले आउने भनेको त्यो नै हो। यो सामान्य छ कि तिनीहरू आफ्नो कामको साथ केहि कमाउन चाहान्छन्। के त्यहाँ नि: शुल्क काम गर्ने कोही छ?
Scl लाई जवाफ दिनुहोस्
अहो केहि चीज जुन आईओएस for को लागि स्थापित स्थापना हुन्छ?
हो, यसलाई "कमबख्त अनुप्रयोगहरूको लागि भुक्तान गर्नुहोस् र चोरीहरू बन्द गर्नुहोस्" भनिन्छ।
र्याटलाई जवाफ दिनुहोस्
hahahahahaha, कि दिन को सबै भन्दा राम्रो उत्तर हो, हाहाहााहा, तपाइँ payrrrrrr गर्न छ
हाहाहा, पक्कै पनि, यदि तपाईंले एक अनुप्रयोग सिर्जना गर्नुभयो र चार्ज गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं चाहानुहुन्न कि उनीहरूले तपाईंको मुर्ख अनुहार अर्कोपट्टिमा नि: शुल्क डाउनलोड गर्दैछन्, वा तपाईं माशोकिस्ट हुनुहुनेछ?
ठिक छ यो तपाईलाई थिएन .. यो ब्रायनलाई थियो तर मैले तपाईको टिप्पणीको जवाफ दिन क्लिक गरें एक्सडीडी
कार्य एक अनुप्रयोगको लागी चार्ज गर्नको लागि पेन्डि do हुँदैन ..
म त्यो गर्छु, तर म चक्क चोर होइन
तपाईं कमिंग गधे हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई किन खरीद गर्नुहोस् यदि तिनीहरू नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ भने ।l
तपाईं कामको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, तर तपाईं ती व्यक्तिहरूबाट चोरी गर्नुहुन्छ जुन काम गरिरहेका थिएनन्। तपाईं चोरहरूले जस्तै दर्शन प्रयोग गर्नुहुन्छ "किन काम गर्दछु वा भुक्तानी गर्छु यदि मैले उनीहरूको कामको उत्पादन अरूबाट चोर्न सक्छु?" ... र तपाईं गधाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ ... तपाईं कोर्रा हुनुहुन्छ।
रतलाद्रोनामा जवाफ दिनुहोस्
म गधा XD को लागी तपाईबाट चोरी गर्दछु मलाई वा केहि पनि चुदाई नगरी जब तपाईले चुस्त गर्नुहुन्छ म तिमीबाट तिनीहरुलाई चोर्छु .. र तिमी मलाई जेलमा राख्न के गर्दैछौ?
मलाई यो लाजमर्दो लाग्छ कि तपाई त्यस्तो सोच्नुहुन्छ, ब्रायन, त्यसोभए गहनाको पसलमा जानुहोस् र सुनको औठीहरू चोर्नुहोस्। समग्रमा, गहनाको पसलमा बसेर काम गरिरहेको छैन।
Rorschach लाई जवाफ दिनुहोस्
होईन, म त्यस्तो सोच्दिन ... मैले यो भनेको छु अन्य व्यक्तिले मलाई तान्दै गरेको कारण, र यो एकदम भिन्न छ, तर म तिनीहरूलाई बुझ्दिन।
TONGBU समाधान हो र JB बाट जान्छ
Mobutu लाई जवाफ दिनुहोस्
दाह, म उनीहरूसँग जेबीको साथ पैसा कमाउन चाहेको कुनै गलत देख्दिन, चिपिंग कोड धेरै नैराश्यकारी हुन सक्छ, कोही पनि नि: शुल्क काम गर्दैन, यदि उनीहरूले यी ह्याकरहरूलाई पैसा कमाएकोमा आलोचना गरे भने उनीहरू धेरै कपटी छन्, न त उनीहरूले उनलाई शुल्क लगाउनेछन् jb
म जेलब्रेक गर्न सक्दिन !!!! सहयोग !!!
मेरो आईप्टनलाई आईट्यून्सको साथ पुनर्स्थापना गर्नुहोस् र इवासि ० एन चलाउनुहोस् र सबै कुरा राम्रो काम गर्दछ .. सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भयो तर जब म अन्तमा रमाइलो गर्ने निर्णय गर्छु! केयर आइकन मेरो स्प्रिboardबोर्डमा कहिँ फेला पर्दैन !!!
कोही उस्तै भएको छ ???
मद्दत !!! म के गरौ!
यो hours घण्टा भयो, तर म तपाईलाई समाधान दिन जान्छु। म तपाईको आईप्याड DFU मोड मा राख्न र ब्याकअप लोड नगरी पुनःस्थापना गर्न चाहान्छु। आईप्याडलाई आईट्यून्ससँग जोड्नुहोस् र चरणहरू गर्नुहोस्। अर्को, उपकरण कन्फिगर गर्नुहोस्, र Evasi8n प्रयोग गर्नुहोस्। यो तयार छ। त्यसो भए तपाईसँग भएको चीजहरू स्थापना गर्नुहोस् र संगीतलाई आइट्यून्स, अभिवादनको साथ राख्नुहोस्।
कार्लोस लुएन्गो हेरासलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो विचारमा तिनीहरूले iOS7 का लागि JB धेरै नराम्ररी व्यवस्थापन गरेका छन्। उनीहरूले पत्रमा भनेको छ वा सly्केत गर्ने हो भने उनीहरूले जेबीलाई यति चाँडै प्रक्षेपण गर्ने योजना गरेका थिएनन्, र यो ठूलो बग हो किनकि iOS7.1 Beta ले थुप्रै सुधार ल्याउँछ र ती ल्याउने मध्ये एक बन्द xploit छ जुन जेबीलाई यो असम्भव छ। इमान्दारीताका साथ, मसँग आईबीएस .4.१.२ मा आईप्याड have छ जेबीसँग आईओएस .6.1.2.१ को जेबीको लागि पर्खिरहेको थियो, तर आज पछि म आईओएस stay मा रहनेछु, र आईफोन of को मामलामा मैले यसलाई आईओएस to मा अपलोड गरें किनभने तिनीहरूले मलाई सिफारिस गरेका थिए। बिस्तारै नयाँ ओएसमा जानका लागि, र म जेबीलाई हेर्दै थिएँ, तर म अझै पनि iOS7.1 लाई प्राथमिकता दिन्छु।
म जेबी गर्न सँधै पहिलो हुँ र म चन्दाको मुद्दाको पक्षमा छु, तर अनुदानलाई सँधै अपमान गरिएको छ, पैसा तिर्ने तरिकाबाट उनीहरूले उनको नामलाई धेरै टिप्पणी गरे, र यदि सौरिकले के गरे भने उनीहरु भन्छन कि उसले जे गरेका छन मलाई धेरै राम्रो लाग्छ, हेर्न को लागी यो सित्तै गर्न को लागी र आफ्नो ट्वीकहरु सित्तैमा अपडेट गर्न को लागी, उसले चिनियाँ खाने भूमि को रूप मा सहन छ, जो कम छैन।
जब त्यहाँ अधिक रुचिहरू खतरामा छन् ...
तैपनि, म यसलाई तार्किक देख्दछु कि उनीहरू आफ्नो कामको लागि शुल्क लिन चाहन्छन्, र त्यसमाथि, प्रयोगकर्ताले € ० प्राप्त गर्दछ। हामी धेरै एप्पल प्रयोगकर्ताहरू र धेरै पैसा जोखिममा छौं, एउटा टोलीको लागि जुन उनीहरूलाई भन्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई बढी हेर्छ वा हाम्रो खर्चमा आफैंलाई समृद्ध बनाउँदछ; म तिनीहरूलाई एउटा ओएल दिन्छु।
यस घटनाको कारण जेबी असफलताको साथ आउँछ भन्ने तथ्यलाई हटाउँदै।
LilFeli लाई जवाफ दिनुहोस्
राउल गुरेरो कारास्को भन्यो
चिन्ता नलिनुहोस्, मलाई शंका लाग्छ कि तिनीहरूले जेबी शुरू गरेका छन् उनीहरूको बाहुलामा केहि न राखी ... म अझै गलत छु। तर मलाई शंका छ।
राउल गेरेरो क्यारास्कोलाई जवाफ दिनुहोस्
म आईप्याड हावामा एकदम नराम्रा कामहरू गर्दैछु, जुन मैले साइडियाबाट स्थापना गरें (ios7 सँग मिल्दो छ) कतै देखा पर्दैन ... मानौं मैले यो स्थापना गरिन
अरू सबैलाई जस्तो तपाईलाई हुन्छ। यदि तपाईंसँग यस पटक आईफोन have छ भने समस्या बिना काम गर्ने एउटै मात्र ट्वीक एयरप्ले 4.०+ हो, यो दुई मोबाइलमा अवस्थित छैन, विस्थापनबाट भिन्न छ, आईफोन FOR का लागि .7.0.० पार्लिक्सका लागि सिरि लाई मन पर्छ।
हाहाहा, मैले आईलाई आईओनोलाई आईओएस .8.१..0 को जेबीमा यति लामो समय लिनको लागि winocm र iH6.1.3sn8w बताइरहेको थियो, तर यो पढिसकेपछि तपाईले चाहानुहुन्छ, लिन मेरो सम्मान winocm र iH0snXNUMXw ...
तपाईंहरू जो एभिडर्सको आलोचना गर्नुहुन्छ तिनीहरू दु: खी र दयनीय देखिन्छन्, केटाहरू जसले जेबीको लागि केहि शुल्क लिदैनन् ताकि तपाईं यसको मजा लिन सक्नुहुन्छ र यसको शीर्षमा तपाईं तपाईंको क्जाज राख्नुहुन्छ र भुक्तानी गर्नुहुन्छ, कसैले पनि तपाईंलाई यो गर्न बाध्य पार्दैन, यदि तिनीहरूले पैसाको लागि बाहिर निकालेका छन् भने यो सही देखिन्छ, उनीहरूको अधिकारमा तिनीहरू हुन् र कसैलाई जवाफदेही हुनु पर्दैन।
के गडबडी माउन्ट गरिएको छ। यसको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि हामीसँग पहिले नै एक ब्रेक ब्रेक छ। समस्या यो हो कि यी चीजहरू उत्तम घरहरूमा पनि हुन्छन्, र जब त्यहाँ शक्ति, पैसा वा कुख्यात वा यी सबै हुन्छन्, सब भन्दा सुन्दर मानिस सबैको लागि भोका वास्तविक राक्षसहरू बन्न सक्छन्।
म सोच्न चाहन्छु, कुनै मजाक छैन कि तिनीहरू चिनियाँ जस्तै धोका दिएका छन्। उनीहरूलाई साइडियाको सट्टा चीनमा चिनियाँ पसल राख्न पैसा दिने वाचा गरिएको थियो र सौरिक अझै बसेको थिएन र उसको पक्षमा कुराकानी गर्दैछ र अर्को जेलरोन घोषणा पनि गर्दैछ। हुन सक्छ, कोही चिनियाँहरूले पाइरेटेड एप्लिकेसनहरू राख्छन् भन्ने सोचबिचारमा मूर्ख भएका थिए (र यसले थोरै समय लिन्छ), र अर्कोले थाहा पाउनु पर्छ कि सिडियामा त्यहाँ धेरै रिपोहरू छन् कि हो, चेतावनी दिइन्छ कि उनीहरू समुद्री डाकूहरू हुन्। , तर यसले तिनीहरूलाई थप्न अनुमति दिन्छ र त्यहाँबाट पाइरेटेड अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्दछ र साइरेडिया ट्वीकहरू पाइरेटेड पनि।
एउटा चूना, बालुवाको अर्को।
मलाई लाग्छ कि तपाईंले भाषामा बढी ध्यान दिनुपर्दछ, तपाईं प्रतिलिपि लेखक हुनुहुन्छ र यस्तै, कृपया वाक्यरचना र भाषाको ख्याल राख्नुहोस्, "भिसा" जस्तो केहि गम्भीर छ, यस बिन्दुमा शर्मिन्दा बाहेक, तपाईं newbies छैनन्; यो पेशेवर गर्नुहोस्।
Of 99% त्रुटिहरू टाईप गर्ने त्रुटिको कारणले गर्दा हो, कहिलेकाँही ओएस एक्स स्वत: सुधारको कारणले पनि। म तपाईलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि म मेरो हिज्जेको ख्याल राख्छु, सफारी चेकरको साथ सक्रिय छ र म पछि वर्डप्रेस जाँचकर्ता पास गर्छु। तर त्यहाँ त्रुटिहरू छन् जब टाइप गर्दा, जो ध्यान दिएर जाने। यो कुरा स्पष्ट छ कि यस मामिलामा ऊ "चेतावनी" दिन चाहान्थ्यो।
Ibasasi7कसरी Evasi0n को साथ जेलब्रेक गर्ने